Yanhasi SERP: Kutaridzika Kutarisa paGoogle Mabhokisi, Makadhi, Akapfuma Snippets, uye Mapaneru | Martech Zone
Patova nemakore masere kubvira pandakasundidzira vatengi vangu kuenda sanganisira zvakapfuma zvidimbu muzvitoro zvavo zvepamhepo, mawebhusaiti, uye mablog. Mapeji eGoogle ekutsvaga enjini dzekutsvaga akange ave kurarama, kufema, simba, mapeji akasarudzika kuti iwe uwane ruzivo rwaunoda… zvikuru nekuda kwekusimbisa kwekuona kwavakaita kune yekutsvaga injini peji rekushandisa vachishandisa data rakarongedzwa rakapihwa nevaparidzi.
Izvi zvinowedzera zvinosanganisira:
Yakananga Mhinduro Mabhokisi nemhinduro pfupi, dzinongoitika ipapo, zvinyorwa, macarousels, kana matafura ayo anogona zvakare kuve nemifananidzo yekuvasimudzira.
Akapfuma Snippets yakapihwa nemawebhusaiti kusimudzira ekutsvaga enjini peji mhinduro nemitengo, ratings, kuwanikwa, nezvimwe.
Makadhi akapfuma yevashandisi-inoshamisira vashandisi vefoni.
Zivo Girafu padivi rerudyi reSERP iyo inopa mifananidzo yakakomberedzwa uye ruzivo nezve kutsvaga.
Ruzivo Mapaneru pane kurudyi padivi reSERP inopa yakamisikidzwa mifananidzo, ruzivo, mepu uye madhairekitori ayo akananga kune brand kana bhizinesi.
Yemunharaunda Pack (kana Mepu Kurongedza) ndiwo moyo wezviwanikwa zvemunharaunda neruzivo rwebhizinesi, wongororo, uye mepu. Izvi zvinonyanya kutungamirwa neGoogle Bhizinesi Bhizinesi rangu riine zvidzoreso uye kuongororwa kwe brand.
Vanhu Vanobvunzawo ipa mibvunzo inoenderana nemhinduro kubva kumibvunzo.
Image Rongedza iyo yakatwasuka carousel pamibvunzo yakatariswa nemeso.
Site Links ndewe runyorwa rwakawedzeredzwa rweakakosha maratidziro munzvimbo dzinozivikanwa. Inogona zvakare kusanganisira saiti yekutsvaga nzvimbo iyo yakanangana neiyo saiti yemukati yekutsvaga mashandiro.
Twitter carousel inoratidza iyo rondedzero yazvino ma tweets kubva kuakaunzi account.
Nhau Bhokisi inguva-inonzwisisika carousel yekupwanya nhau uye epamusoro nyaya dzinowanikwa pane anozivikanwa enhau masaiti.
Nekugadzirisa yako data uye nekutevera maSchema zviyero, chiratidzo chinogona kukanganisa zvakanyanya kuoneka kwavo mukati meaya maficha ekutsvaga pane yekutsvaga injini mhedzisiro peji - kunyanya kana zvasvika pakusimudzira yavo yakanyorwa mhedzisiro pane peji vachishandisa zvakapfuma zvidimbu.
Pane nharo isingafadzi pane izvi futi… iyo Google inokwanisa chengetedza vashandisi pamapeji avo ekutsvaga enjini yekutsvaga pane kuvaunza kumapeji ako ekuenda. Kana ivo vachigona kuchengeta vashandisi ipapo, vanogona kuve vanokwanisa kubaya kushambadza, chingwa cheGoogle uye bota. Asi hei… Google ine varidzi vekutsvaga, saka ndinotya kuti unofanira kutamba mutambo wavo. Ndinovimba, paunenge uchityaira mitsva yekutsvaga injini kune yako saiti, urikuita basa rakakura pakubata nekutora ruzivo rwemushanyi wako kuti ugone kuvaka hukama hwakananga.
Google haingoti chete kuti kupa iyi meta dhata kunogona kukonzera mharidzo yakakwana paSERP, ivo vanotsanangudza zvizere kuti zvidimbu zvidiki zvinogona kuvandudza yako rese injini yekutsvaga nekuti inodzidzisa kwavo algorithms pane ruzivo rwuri mukati peji.
Kana kambani yako, vatengesi vako, uye zvemukati zvako zvisingatore mukana nazvo ruzha rwemashoko, iwe unenge uchizosiiwa muvhu nevakwikwidzi vanoita. Kana wako wekushambadzira asiri kuridza mhere kuti uzviite - unofanirwa kutsvaga kambani nyowani. Uye kana iwe uine chivakwa kana chekare zvivakwa izvo zvisinga tsigire ivo, unofanirwa kutama kana kugadzira mhinduro inoitisa. Mapfuma akapfuma haasi kungogonesa kutsvaga chete, iwo ari kukanganisawo-kuburikidza nemitengo kupfuura zvavaimbofungidzira.
Iyi infographic kubva kuBrafton, Nongedzo Yekutarisisa kune Ese Google SERP Feature: Snippets, Panels, Kubhadharwa Ads uye Zvimwe, Inopa kutarisisa kwekuona kwakapfuma snippets uye data rakarongedzwa rinotarisa pane yekutsvaga injini mhinduro peji.
Tags: microdatamicroformatruzha rwemashokoschemaschema markupyekutsvaga injini mhedzisiro mapejinyokawall Street jarwsj
Mar 19, 2012 pa 9: 25 AM
Semutemo handisi munhu mukuru we infographics, asi ndinofanira kutaura kuti iyi yakaitwa zvakanaka uye inoita basa rakanaka rekutsanangura zvimedu zvakapfuma - kunyanya nezve magadzirirwo avanoita CTR uye kutendeuka.
Mar 19, 2012 pa 12: 47 PM
Bvuma, Jeff! Vakaita basa guru.